AUNG PYI SONE AYE (Buddhism) အောင်ပြည့်စုံအေး: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလိမ်ပြောတတ်တယ် (ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး)
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလိမ်ပြောတတ်တယ် (ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး)
မေး။ ဒကာကြီးအိမ်က နေ.တ၀က်လောက် ၀အောင်ကျွေးတဲ. ဒကာမကြီးနှင်. သံသရာတစ်လျှောက်လုံး ၀အောင်ကျွေးတဲ. ဘုရားရှင် ဘယ်သူနဲ့ ပိုတည့်မှာလဲ။
ဖြေ။ ဘုရားရှင်နဲ့ အတည့်ဆုံးလို.ပြောရမှာပါပဲဘုရား။
မေး။ ဒါဖြင်. ဒကာမကြီးက ကျွေုးတာတော.ဖြင်. အဟုတ်စားတယ်၊ဘုရားရှင်က ကျွေးတာတော. ဘယ်နှယ်လဲ။
ဖြေ။ ဆုတ်ဆိုင်း ဆုတ်ဆိုင်း ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား၊ဒါကြောင်.တပည်.တော်ကိုယ်တိုင်ကိုတပည်.တော် အမြင်ကပ်နေပါတယ်ဘုရား။
ရုပ်နှင်.နာမ်ကို မတဲ.လို. လုပ်တာဗျာ.။ ဟုတ်ကဲ.လားဗျာ။(ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား။)သည်တော.ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုကြတယ်။အားထုတ်မယ်ဆိုပြီး အားထုတ်တယ်၊အားထုတ်တော. ညောင်းလာပြန်ပြီလိုဖြစ်လိမ်.မယ်၊သည်တော.တော်တော.လို.ပြောမှာလား၊ မပြောနှင်.၊ငါဘာလိုညောင်းရမလဲ ဆိုပြီး သည်လိုခိုင်း။ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်၊ဥပါဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေ၊ သေသွားလိမ်.မယ်လိုဆိုပြန်ရင်လဲ သေရင်သေပေစေ၊ အဲသည်လိုခိုင်းဗျာ.။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက သနားအောင်ပြောမယ်၊
သူနဲ.က တဲ.မှမတဲ.ဘဲကိုး၊ သည်တော.ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲဆိုရင် သူကသေသွားလိမ်.ဆိုတော.သေသွားဘာဖြစ်လဲ၊ အရင် တုန်းက သေခဲ.လှပြီးပြီ။ ဒကာကြီးလဲ ဘယ်နှစ်ခါလောက်သေခဲ.သလဲ။
မေး။ အဲဒီလို သေခဲ.တာတွေဟာ အားထုတ်ရင်း သေတာလား။
ဖြေ။ အားထုတ်ရင်းမဟုတ်ပါဘုရား။အကုသိုလ်လုပ်ရင်းသေလိုအခုထက်ထိ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်နေ
သည်လိုအားထုတ်လိုများ အရင် တုန်းက တစ်ခါမှ မသေခဲ.ဖူးသေးဘူး၊အားထုတ်ရင်းသေ
ချင်နေတာ လင်းအောင်တောင် မနေလိုက်ပါနှင်.၊ အခု ချက်ချင်းပဲသေပါစေတော.၊ အား
ထုတ်ရင်းသေဖူးတယ်ရှိအောင် ငါသေချင်နေတာ အဲဒီလိုပြော။ ဒကာကြီး အခုလိုတရား
အားထုတ်ရင်း သေရင် ဘယ်နှယ်လဲ. ဆင်းရဲမှာလား။ (ချမ်းသာမှာပါဘုရား။) သည်အတိုင်း
တိုင်း အရင် တုန်းကလိုနေရင်း သေမယ်ဆိုရင် ဘယ်နှယ်လဲ.၊(ဆင်းရဲမှာပါပဲဘုရား။) ပျင်း
ပျင်းဖျင်းဖျင်း နေရင်းသေရင် ဘယ်နှယ်လဲ့။(အရင်တုံးကလို သံသရာတလျှောက်လုံး လည်
လားဗျာ.။(မဟုတ်ပါဘုရား)။တရားအားထုတ်ရင်း နေမကောင်းချင်လိုက်တာလို. အဲဒီလို
တရားအားထုတ်လိုများ သံသရာ တလျှောက်လုံးမှာ ညောင်းကိုမညောင်းဖူးသေးဘူး။ အခုလို
ညောင်းတာများ ကောင်းလိုက်တာလိုအဲဒီလိုပြောဗျာ.။ညောင်းတယ်ဆိုပြီး အလုပ်ကိုမရပ်ပဲ
နှင်. ရှေ.ကသူတော်ကောင်းများဟာအခုလို သွားတယ်ဆိုတာ သိပြီးရင် အခုလဲပဲ ဒို.တော.
သည်လိုလုပ်မယ်၊ သည်လိုထိုင်မယ်ဆိုပြီး အဲဒီလိုသာလုပ်ကြပါဗျာ။ရှေ.ဆက်ပြောနေရင်
ဒို.တော.ဖြင်. လုပ်ချင်လှပြီ၊သည်ရဟန်းကြီးဟာ တယ်အပြောရှည်တယ် ပြောနေကြပြီထင်
ပါရဲ.။လုပ်ရမှာက ပြောနေလိုမပြီးဘူး။ အားထုတ်မှပြီးမှာ။အခုနက ဘုရားဆုံးမတဲ. အတိုင်း
ထားပြီး လုံ.လ၀ီရိယတွေနှင်. အဲသည်လိုထူထောင်ကြ အားထုတ်ကြဗျာ.။
အားထုတ်ရင်းသေဖူးတယ်ရှိအောင် ငါသေချင်နေတာ အဲဒီလိုပြော။ ဒကာကြီး အခုလိုတရားအားထုတ်ရင်း သေရင် ဘယ်နှယ်လဲ. ဆင်းရဲမှာလား။ (ချမ်းသာမှာပါဘုရား။)